Guyyaan Finfinnee: Adoolessi 13- Finfinnee fi Naannoo Ishiitti Kabajame.
Date: July 14, 2015Author: Oromedia 0 Comments
(Oromedia, 14 Adoolessa 2015)Guyyaan Finfinnee-Adoolessa 13 maadheelee fi caayaalee Oromoo biyya keessa jiran biratti haala hoo’aa fi iccitawaan kabajame.
Sirna Adoolessa 13 bara 2015 maadheelee fi caayaalee addaddaa keessatti gaggeeffame irratti barumsi seenaa magaalaa Finfineen walqabate suuraan deeggarame barsiifameera.
Barsiisa Seenaa Finfinnee kana keessattis akka ibsametti Finfinneen wiirtuu gosa Oromoo keessa isa tokkoo kan ta’e, damee Booraanaa abbaa qabeenyaa gosa Tuulamaa ti.
Tuulamaa keessa gosti guddaa fi inni angafaa, Galaan kan Qarqara tulluu Cuqqaalaa gara kibbaa kaasee haga Hawaas jiraatu abbaa araddaa itti ture.
Haataúutii erga humni alagaa dirree Oromootaa kana dhaalee egalee hundeen Oromoo ni jijjiirame.
“”Lafti Finfinnee kun bara Minilik qabamuun ishii beekamaadha.”kan jedhan barsiissana seenaa tokko, Finfinneen yeroo duraa santti qubsuma waraana fi maatii nafxanyootaa akka turte addeessan.
Adeemsa keessas, gara magaala guddiitti Empaayerittitti akka jijjiramteen Oromoo buqqisuun akka eegale saaxilan. “Finfinneen magaala guddoo Empaayerittii akka taateen, Oromoo buqqisuu fi dhiibuu eegalte,” kan jedhan barsiisana seenaa kun, Oromoonis bakka sana irraa buqqifamee gara kutaa adda addaatti faca’uuf fi gosoota naannoo sana jiranitti makamuu eegaluu addeessan.
Haalli kun yeroo san irraa eegalee haga yoonaatti itti fufuu kan ibsan maanguddoon biyyaa maadhee kana irratti afeeraman biroo immoo buqqifamuun bara Waayyaanee keessaa hedduu kan hammaate taúu ragaa bahan.
“Bara wayyaanee keessa buqqifamuun Oromoo itti hammaatee jira. Lafti naannoo Finfinnee akka warqiitti gatii guddaa kan baasuu dha. Abbootii aangoo Wayyaanee irroomsuuf qonnaan bultooti Oromoo beenyaa tokko amlee qeée isanaii irraa buqiifamaa jiran,”jechuun haala adeemaa jiru tokko tokkoon tarreessan.
Haalli kun daran hammaatee sababa maastar pilaanii jedhuun Oromoo addaan fageessuu fi addaan facaasuutti akka waan jiruuf kan jijjiiruuf ijaarsaa fi biramannaan olaanaa itti fuffiinsaan akka barbaachisu barsiisa kana irratti himameera. “Amma haalli jiru, Oromoo balleessuu irratti jabinaan kan xiyyeeffatee dha. Nuti kana hubachuun diddaa keenya jabeessuu qabna; birmannaa qabsoo keenyaaf goonus dachaa gochuutu nurra jiraata,” jedhan.
Hirmaatooti sagantaa kabaja guyyaa Finfinnee kana irratti argaman, itti dabaluunis, humnaa fi dandeettii isaanii jabeessanii qobsoo diddaa garbummaa itti fufiinsaan gaggeesusuf gaachan seenaa qabatanii waadaa seenaniiru.
Seenaa Finfinnee toora kana irraa dubbisuu dandeessu: http://oromedia.net/seenaa-finfinnee/
Previous Previous post: Waldaan Ogeessota Fiilmii fi Aartii Oromoo Hundeeffame
Next Next post: Alshabaab Haleelamaa Jira